‘सबैकुरा पाउने खुसी हुन सक्छ, तर जो सबै छाड्न सक्दछ उ नै सुखी हुन्छ’ – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : एउटा बौद्ध कथा छ, भगवान बुद्धसँग भेट्न एक राजा आए र सोधे— हाम्रो राजकुमार, जसलाई सबैकुराको सुविधा छ, जो ठूलो महलमा रहन्छन, उनीसँग नोकर—चाकरको पूरै फौज छ, उनी खुसी रहँदैनन् । जहिल्यै तनाव र समस्यामा घेरिएका देखिन्छन् । मैले हरेक तरिकाको सुविधा दिएर हेरेँ । उनी प्रशन्न हुँदैनन् । जबकि, तपाईंको ति भिक्षु जो पदयात्रा गर्दछन्, जे प्राप्त हुन्छ त्यहि खान्छन्, बस्नको लागि जुन कुटि भेटिन्छ त्यहि सुत्छन्, उनको अनुहारमा जहिल्यै अत्यन्तै खुसी देखिन्छ । यसको कारण के हो ?
भगवान बुद्धले उत्तर दिए— खुसी खोज्ने हो भने जोसँग केही छैन, उसमा खोज्नुहोस् । जसले संकल्प गरेर सबैकुरा छोड्छ उ नै खुसी रहन सक्छ । जो स्वेच्छाले सबै चिजलाई त्याग गर्दछ, उ नै जहिल्यै प्रशन्न रहन सक्दछ । भिखारी कहिल्यै खुसी हुँदैन, किनकी उसले छाडेको हुँदैन । उ त अभावमा जीवन जिइरहेको छ । अभावको जीवन जिउनेवाला कहिल्यै खुसी रहन सक्दैन । चिन्ताले उसलाई जहिल्यै घेरिरहन्छ । जसले जानबूझमा छोडेको छ, उ खुसी रहन सक्छ । यहाँ दुइवटा कुरा छन्— एउटा छुट्नु र अर्को छोड्नु । तपाईंको राजकुमार सबै सुविधाबाट परिपूर्ण छन तर उनको मनमा ति सुविधा विर्सने सँधै डर छ । छुट्नु र छोड्नु, दुइमा अन्तर छ । छुट्नुले हामीलाई डराउन सिकाउँछ, जबकि छोड्नुले तपाईंको आत्मविश्वास र प्रशन्नता वृद्धि गराउँछ ।
जसलाई कुनै चिज प्राप्त भएको छैन भने त्यसको त्याग गर्न सकिँदैन । त्यागी उ हुन्छ जो आफ्नो स्वतन्त्र मनबाट त्याग गर्दछ, सुविधा सम्पन्न व्यक्ति पनि खुसी रहन सक्दैन । उसलाई पैसाको सुरक्षाको चिन्ताले सताउँछ । उ जहिल्यै भयभीत हुन्छ । निडर केवल उ नै हुन सक्छ, जसले स्वेच्छाले त्याग गर्दछ ।
राजालाई आफ्नो प्रश्नको उत्तर प्राप्त भयो ।
Nextरबि लामिछानेले जनमैत्री अस्पताल मेरो हैन भनेर बिरो,धीलाई स्पष्टी,करण दिएपछी हरिले दिए यस्तो चेता,वनी,उठाए यस्तो प्रश्न ? हेरौ भिडियो